Ongqongqoshe bamazwe ase-Afrika bazoba nomhlangano omkhulu kowe-Travel Indaba | News24
Ongqongqoshe bamazwe ase-Afrika bazoba nomhlangano omkhulu kowe-Travel Indaba
eThekwini - ONgqongqoshe bezokuvakasha kusukela emazweni ase-Afrika bazoba nomhlangano ukuqinisa ubudlelwano kulemboni.
Lokhu kuvezwe wuNgqongqoshe wezokuVakasha wakuleli uDerek Hanekom eThekwini ngaphambi kokuvulwa kumcimbi iTravel Indaba.
UHanekom uthi lo mhlangano ubaluleke kakhulu ekuqiniseni ukusebenza ngokubambisana kulelizwekazi lase-Afrika.
Isiqubulo salo mhlangano sithi, Integrated Regional Tourism – A tool for economic development, (Ubumbano kwisifunda kwezokuvakasha, yilona thuluzi lokuthuthukisa umnotho) kanti uvuleleke koNgqongqoshe bezokuvakasha, izazi zezokuvakasha kanye nababamba iqhaza elibalulekile kulemboni.
"Imboni yezokuvakasha e-Afrika ikhula ngamandla futhi iheha izivakashi eziningi ezinothando lwezamasiko.
"Ukukhula kwale mboni kufuna nathi sihlale phansi siqhamuke namasu okuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukumelana nokwanda kwesibalo sabavakashi futhi siyayithuthukisa nemikhiqizo yethu yezokuvakasha,"kusho uHanekom.
Kulindeleke ukuba lomhlangano uhanjelwe oNgqongqoshe base-Angola, Kingdom of eSwatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Uganda, Zambia naseZimbabwe.